१० गते हल खुल्ने संभावना कति ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
फिल्मी फण्डा । सरकारले कोरोना भाइरस प्रभावका कारण सबै क्षेत्र खोल्न निषेध गरिएको थियो । कोरोना भाइरसको प्रभाव कम हुदै गएको कारण हो या सरकारले अन्य व्यवस्थापनको कारण केही क्षेत्रहरु विस्तारै खुलाउँदै आएका छन् । ठूला होटल, पर्यटन र फिल्म क्षेत्र भन्ने अझै पनि खुल्न सकेको छैन । कहिलेबाट यो क्षेत्र खोल्ने भन्ने कुनै जानकारी समेत सरकारले दिएको छैन ।
सरकार पूर्ण मापदण्ड सहित हल खोल्न तयार देखिएपनि कहिलेदेखि हल खोल्ने वारेमा अझैं टुङ्गो लागेको छैन । पछिल्लो समय संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मापदण्ड सहित छिट्टै हल खुल्ने बताइएपनि अहिलेसम्म सरकारले औपचारिक निर्णय गर्न सकेको छैन ।
चलचित्र विकास बोर्डले निरन्तर हल खोल्न पहल गर्दै आईरहेको छ । बोर्डका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले समेत ठाडो आदेशमा मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताव लाने पूर्ण तयारी गरेको छ । विभिन्न समयमा फिल्म क्षेत्रसँग आवद्ध संघसंस्थाले हल खोल्न ज्ञापन पत्र बुझाँउँदै आएका छन् ।
वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले पनि कोरोना भाइरस प्रभावमा बन्द भएका केही क्षेत्र खुल्ने नखुल्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । यहि बीचमा फिल्म हलवालाहरुको संस्था चलचित्र संघले पौष १० गतेदेखि हल खोल्ने एकतर्फि निर्णय गरिसकेको छ । हलवालाहरुले पौष १० गतेबाट हलखोलेर सरकारलाई दबाब दिने र चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यहि बीचमा हल खुल्छ की खुल्दैन भने कौतुहलता उत्पन्न भएको छ । कोरोना प्रभावकै बीचमा दर्शक हलसम्म आउने हुन् की हैनन भन्नेमा हलवाला नै अनभिज्ञ छन् । तरपनि संघले पौष १० गतेदेखि हल खोलेर चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् । राजधानीकै अधिकांश हलमा पौष १० गते हल खोल्ने तयारी शुरु भएको देखिैदन ।
अधिकांश हलका मालिकहरु निराशामा छन् । “खै कसरी हल खोलौं, तयारी केही छैन । फिल्म छैन । दर्शक हलमा आउने हुन् की हैनन् ? सरकारले केही राहत पनि दिएको छैन ।” हाम्रो प्रश्नमा प्राय हलवालाहरुको एउटै स्वर सुनिएको छ । संघका केही पदाधिकारी रहेको हलहरु भने खोल्ने तयारी भईरहेको संघका एक सदस्यले फिल्मी फण्डालाई जानकारी दिए । शुरुमा राजधानीमा ८ देखि १० वटा हल खोल्ने तयारी भईरहेको समेत उनले जानकारी दिए ।
शुरुमा कुन फिल्म रिलिज हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले कोरोना भाइरस प्रभावले रोकिएको दुई फिल्म सेन्टिभाइरस र आमाबाट नै फिल्म हल खुल्न सक्ने बताएका छन् । हल खोल्न सरकारलाई बुझाएको मापदण्ड समेत हलमा तयार गरेका छैन । यहि १० गतेबाट हल खोल्ने भनिएतापनि दर्शकलाई हलसम्म तान्नको लागि नत प्रचार शुरु गरेका छन्, न आन्तरिक तयारी ।
प्रदर्शन हुन बाँकी फिल्मका निर्माताहरुले पौष महिना भरि नै फिल्म रिलिज गर्ने सोच बनाएका छैनन् । केही साना बजेटका फिल्मले माघ १ बाट रिलिज गर्ने सोच बनाएका छन् । संघका पदाधिकारीहरु सरकारको निर्णय विना पनि केही हल खोल्ने तयारीमा छन् । तर आवश्यक तयारी, फिल्मको रिलिज र प्रचार प्रसारको अभावमा त्यो प्रभावकारी हुन्छ की हुदैन भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।
हल खोल्न धेरै ढिला भइसकेको छ । यसको लागि संघले निर्माता संघ, कलाकार संघ र विकास बोर्डसँग सहकार्य गरि आवश्यक तयारी र प्रचार प्रसार गरि प्रत्यक्ष रुपमा दर्शकलाई आकर्षण गर्न सके हल खोल्नुको प्रभाव बढाउन सकिन्छ ।
यसले शुरुमै नभएपनि आउँदो महिनादेखि नयाँ फिल्म रिलिज गर्ने र दर्शकको उपस्थितीलाई बलियो बनाउन सक्ने आधार तय हुने थियो । विभिन्न देशमा शुरुमा हल खुलेर बन्द भएको उदाहरणहरु धेरै छन् । यहि उदाहरण भित्र नेपाल पर्न नपरोस् शुभकामना ।